Sabotsy, Janoary 22, 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Efa nandritra ny roa volana izahay no nandefa ny onjam-peo ary manohy manangana mpanaraka manaraka tsara Radio Talk Radio. Vao haingana, ry namana Erik Deckers ary Kyle Lacy handeha hiresaka ny bokin'izy ireo farany Famantarana ny tenanao: Ahoana ny fampiasana media sosialy hamoronana na hamerenanao ny tenanao.
Tena afa-po izahay tamin'ny Blog Talk Radio. Serivisy tena tsara izay tsotra ampiasaina ary tsy mitaky fahaiza-manao manokana hanombohana. Nahazo a Mikrophone podcasting Yeti, saingy mamela anao hifandray ihany koa ny serivisy. Tamin'ity herinandro ity dia nanana olana vitsivitsy tamin'ny Internet izahay ka dia nampiasa ny finday ho an'ny finday fotsiny aho mba hanaovana ilay fampisehoana.
Efa novaiko ny sidebar mba hampisehoana ireo seho farany amin'ny radio, fa tena te hampiditra an mpilalao audio mba hahafahan'ny mpitsidika milalao ilay fizarana mivantana avy eo amin'ny sisin-tany. Ao anatin'ny fetch_feed loop izay mamaky ny fahana sy mampiseho azy, mila mampiditra sombin-kaody fotsiny ianao hampidirana ny rakitra mp3 avy amin'ny Blog Talk Radio.
Ity dia hanampy ny lalana tena izy ho an'ny mp3 mpilalao mivantana ao anatin'ny fononteny toradroa izay mandalo ny miovaova amin'ny asan'ny insert_audio_player:
[Feo: get_permalink (); ?>. Mp3 | width = 100%]
Izany dia manondro ilay mpilalao audio ho an'ny rakitra feo nampiantranoana tao amin'ny Blog Talk Radio. Tsy dia ratsy loatra amin'ny tsipika kaody iray!
Finday Aza miantso ny fisoratana anarana tsy ho ela
Mar 28, 2011 ao amin'ny 11: PM PM
Eny, ny microphone Yeti dia mihoatra ny nandrasana. Olana amin'ny kalitao
dia tao anatin'ny dingan'ny fiovam-po tao amin'ny BlogTalkRadio - ary azontsika atao koa izany
havaozy tsy ho ela ny kaontinay raha te hahalala izany na tsia. Ny mic
Azo antoka fa tsy namboarina hivezivezena, fa mipetrapetraka tsara tarehy
eo amin'ny birao. 🙂 Faly be aho amin'ny fividianana - ary ny vidiny koa.